A Better Tomorrow ( 2018 ) - Myanmar Asian TV
A Better Tomorrow ဆိုတဲ့အတိုင်း 1986 က စလို့ Chow Yan-Fat အဓိကသရုပ်ဆောင်​ပြီး ရိုက်​ကူးခဲ့တဲ့ ရဲစုံထောက်​ကား​လေးဘဲဖြစ်ပါတယ် ….
နာမည်​ကြီး အက်​ရှင်​ ဇာတ်ကားတွေ အရိုက်​များတဲ့ ​ဟောင်​​ကောင်​ရဲ့ ဒါရိုက်တာကြီး ဂျွန်​ဝူ က​နေ ရိုက်​ကူးထားတာဖြစ်​လို့ အက်​ရှင်​ ဇာတ်​လမ်း​ကောင်း​လေးဆိုတာ ငြင်းလို့ မရပါဘူး …
အခုထွက်တဲ့ A Better Tomorrow 2018ကတော့ A Better Tomorrow ရဲ့4 ကားမြောက်လေးပါ
(WhenaSnail Falls in Love 2016) ကား နဲ့ ရဲစုံထောက် ကားတွေ ရိုက်ပြီး
နာမည်ကြီးလာတဲ့ မင်းသား Wang Kai………..
(Ice Fantasy 2016) ကားမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ မင်းသား ချော Ma Tianyu…………
(Our times 20 15) ထဲက မင်းသား Wang Da Lu…………
Google မှာ 80% အထိ ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေ ရှိပြီး…..
IMDB မှာတော့ 5.4 /10 အထိ ရရှိထားတဲ့ စုံထောက်ကားလေးပေါ့……
TMBD မှာ လဲ 80 % လောက်ထိ လူကြိုက်များထားတဲ့ ကားလေးဆိုတော့ ကားကောင်းတစ်ကားဆိုတာ ငြင်းလို့မရနိုင်ပါဘူး….
မှောင်ခိုပစ္စည်းတွေကို သယ်ယူပို့ဆောင်တဲ့ ကျိုခိုင်မှာ နောက်လိုက်ညီလေးရှောက်မာနဲ့ရဲဖြစ်သူ ညီအရင်း အားချောင်ဆိုပြီး ညီနှစ်ယောက်ရှိတယ်
ကျိုခိုင်က သူ့ညီအရင်းကရဲမှန်းသိချိန်တွင် မှောင်ခိုအလုပ်ကိုလုံးဝစွန့်လွတ်ခါနီးမှ ဘယ်လိုချောက်ချခံရမလဲ ?
အားချောင်ကရော ရဲတယောက်အနေနဲ့ သူ့အကိုအကြောင်းကို ဘယ်လိုသိသွားမလဲ ဘာဆက်ဖြစ်မလဲ
ရှောက်မာကရော သူယုံကြည်ရတဲ့အကိုအတွက် ဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတာကိုတော့ ဇာတ်ကားကိုကြည့်ရှုအားပေးကြပါ …
File Size : 960.78 MB ( 720p ) | 558 MB ( 480p )
Soliddrive.co Myanmar960 MB Download Openload.co Myanmar960 MB Download Soliddrive.co Myanmar558 MB Download Openload.co Myanmar558 MB Download
Trailer: A Better Tomorrow ( 2018 )